Mitokona Manerana ny Firenena Ireo Mpamily Kamiao ao Kolombia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jolay 2016 12:45 GMT
Nitokona nanomboka tamin'ny voalohan'ny herinandron'ny volana Jiona 2016 ny sendikàn'ny mpitondra kamiao sy ny mpitatitra entana ao Kolombia, niteraka vesatra goavana ho an'ny toekarem-pirenena izany. Milaza ny tombatomban'ny kaonservativa fa nitondra fahavoazana teo amin'ny 1,3 miliara pesos Kolombiana (eo amin'ny 444 tapitrisa dolara Amerikana*) ny fiatoana asa . Manaraka ny fitokonana mitovy aminy izay nataon'ny mpitondra kamiao dimy taona lasa, tamin'ny taona 2011 izany rehetra izany.
Vokatry ny olana maromaro tsy voavaha.ny fitokonana. Mitaky amin'ny governemanta mba handray ireto dingana manaraka ireto ny sendikà:
.@COL_EJERCITO [Tafika Kolombiana] nanaraka ny valalamanjohy manavatsava an'i La Union-El Carmen [tanàna Kolombiana]. Fitokonan'ny Mpanamory kamiao pic.twitter.com/SxncDIvdv8
Tao Bogota tamin'ny 4:40 hariva #ParoCamionero [Fitokonan'ny Mpitondra Kamiao], MITOMBO NY FITOKONANA. @atccomunicacion @JorgeERojasG @ACCnoti pic.twitter.com/vlp8rpgAJG
#LoMásVistoDeLaSemana [NyTenaBeMpijeryTamin'ityHerinandroIty] Hetsika fandrobàna nandritra ny Fitokonan'ny Mpanamory kamiao pic.twitter.com/mJMjOg7NGQ
Mba hanaovana dokambarotra ho an'ny fanentanana, nampiasa ny tenirohy #ParoCamioneroSiExiste (Misy ny Fitokonan'ny Mpitondra Kamiao) ireo mpisera Twitter:
@JuanManSantos Satria laharam-pahamehanao ny Hery Tafika Revolisionera misahana ny Rongony-Fampihorohoroana Ho fitandroana Filaminana Amerikana Atsimo ao Kolombia. ITY HAFATRA HO ANAO… Misy ny Fitokonan'ny Mpitondra Kamiao. Isika, no mendrika tsara kokoa. pic.twitter.com/U3Y2VYwHla
Noho ny tsy fisian'ny fifanarahana sy ny mety hihamafisan'ny fihetsiketsehana, nanome baiko handefasana miaramila eny amin'ny lalana rehetra ny fanjakana. Mihahenjana ny toe-draharaha ankehitriny, miaraka amin'ny fitokonana hafa ao amin'ny orinasan'ny fitrandrahana labiera izay vao mainka hampitombo ny fihenjanana amin'izao fotoana izao.